Iindaba -Uyigcina njani i-excavator encinci kunye nebhakethi
Uyigcina njani i-excavator encinci kunye nebhakethi
Ukulungiselela ngaphambi kokusebenzisa isixhobo sokumba
1.Ukuhlolwa kweoyile ezintathu kunye nolwelo olunye: i-hydraulic oyile, ioyile yeinjini kunye nokuhlolwa kweoyile yedizili, ngakumbi ioyile ye-hydraulic kunye neoyile ye-injini, ekufuneka ihlangane nemigangatho echazwe ngumenzi. Isipholisi kufuneka sikwimo efumileyo, kwaye ujonge inkqubo yokupholisa ukuvuza.
2. Apho igrisi (ibhotolo) ifuna ukongezwa, igrisi kufuneka igcwaliswe ngokupheleleyo.
3. Ubumdaka kunye nobutyobo ngaphakathi ngaphakathi kwabakhasayo kufuneka zicocwe kangangoko kunokwenzeka. Emva kokucoca, jonga uxinzelelo lomkhangeli kwaye ungeze igrisi ngokomgangatho wokuqinisekisa ukusetyenziswa kwesiqhelo kwendlela yokuhamba.
4. Ukuba amazinyo emele kunye namazinyo asecaleni agugile kakhulu, kufuneka afakwe endaweni yawo ngethuba ukuqinisekisa amandla okumba aqhelekileyo esimbiwa.
(2). Iindawo eziza kuqatshelwa kusetyenziso lwezinto zokumba
1. Emva kokuba i-excavator iqalile, vumela i-injini ibaleke ngesantya esisezantsi kwaye kungabikho umthwalo kangangexesha elithile (ubude bexesha buxhomekeke kubushushu), kwaye ulinde iqondo lobushushu benjini ukuba likhule ngokufanelekileyo ngaphambi kokwenza umthwalo omkhulu wokumba .
2. Phambi kokombiwa, zonke izinto ezenziwayo ezisemgangathweni zesikhululo kufuneka zenziwe ngaphandle komthwalo ukukhangela ingxolo engaqhelekanga kunye nemilo engaqhelekanga.
3. Xa kumbiwa, umembi kufuneka asebenzise amanyathelo afanelekileyo okombiwa ukuqinisekisa amandla okombiwa okuphezulu, kunye nokunciphisa ilahleko yesiqhelo yeenxalenye zesakhiwo.
4. Xa isixhobo sokumba sisebenza ngokuqhubekayo kangangexesha elide, kufuneka sijonge inkqubo nganye, ngakumbi ukugcinwa kwamalungu esakhiwo, siqwalasele iindawo ezifuna ukuthanjiswa kwithuba elithile lexesha, kwaye igrisi kufuneka yongezwe ( Kuyacetyiswa ukuba ukhangele kwaye ungeze iiyure ezingama-5-6).
5. Kwimeko yeemeko zokusebenza ezimbi kakhulu (udaka, ukhula, udongwe, njl. Njl.), Inkunkuma kufuneka icocwe kwangexesha ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwesixhobo sokukhupha, ngakumbi injini yeyona nto iphambili, kwaye akubikho Inkunkuma ejikeleze injini ukuqinisekisa ubushushu obuqhelekileyo benjini.
Ixesha Post: Jun-16-2020